chukuprakash | Nepali Lifestyle,Nepali literature,entertainment,Software
अप्रिल फस्टमा यसरी मूर्ख भए साहित्यकारहरु
मुर्खको सुचिमामा हजुर पनि पर्नु भयो । बधाइ छ ।
Posted by Prakash Aryal0comments
मुक्तक : प्रेमको बिषयमा उ अज्ञानि हुनसक्छ [ हरिशरण अर्याल ]
उनिमा पनि अदृश्य जवानी हुनसक्छ
जवानी भित्र अनेक कहानी हुनसक्छ
सोच बिचार बिना आरोप नलगाउ मित्र
प्रेमको बिषयमा उ अज्ञानि हुनसक्छ ।।
"क्रेजी लभ" भित्रको क्रेजहरु
म तेस्तो कुनै समिक्षक त होइन र समीक्षा गर्न पनि जान्दिन तर एउटा पाठकको नजरबाट भेेटेको केही कुरा भन्न मन लाग्यो।
आत्मीय मित्र देवराज भन्तनाको उपन्यास सिध्याइसकेपछि मनमा अनेकन कुराहरु उब्जे जसलाई लेख्ने जमर्को गरेको छु। उहाँको यति सानै उमेरमा उपन्यास लेख्ने हिम्मत चानचुने कुरा होइन जस्तो लाग्छ। र यो प्रयासले नेपाली साहित्यमा उहाँ भित्र भएको सम्भावनालाई पनि खोतलखातल गरेको जस्तो लागेको छ।
उहाँले विषयवस्तु पनि आफ्नो उमेर अनुसार नै छनोट गर्नुभएको रहेछ तेहि भएर न्याय पनि गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। उपन्यास पनि मलाई औसतमा राम्रै लाग्यो। यो उपन्यासको शक्ति भनूँ या जेसुकै भनूँ पाठकको ध्यान तानिरहन सक्नु हो। नेपालीहरुको बाध्यता विबसता पनि मजैले पोखिएको छ। हाम्रै उमेरहरुको कथा भएकोले क्रेजी लभले बजार पिट्नेमा दुइमत छैन। तर उपन्यासमा उपकथाहरुको प्रस्तुति तेति दमदार लागेन र लेखकले पनि अलि हतार गरेजस्तो पनि लाग्यो। लेखकको लेखनीमा प्रकाश कोविद, युधीर थापा, सुविन भट्टराई जस्ता लेखकहरुको गन्ध अलिअलि पाइन्छ हुन त अरुले हिडिसकेको बाटो हिँडे चाडै शिखर पुग्न सकिन्छ र आफैले बाटो खन्दै हिड्न अलि गाह्रो हुन्छ तर साहित्यमा त्यो चाहिन्छ जस्तो पनि लाग्छ अस्तित्व बचाउनको लागि। उहाँको यो पहिलो प्रयास सबै कुरा खोज्न पनि भएन अरु त बिस्तारै निखारिदै जाने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। र उपन्यास यति हूदाहुँदै पनि दमदार लाग्यो। अलिअलि गल्ती त भैजान्छन् नि(अन्याथा नलिनु होला यो मेरो नितान्त ब्याक्तिगत बिचार)। अनि उपन्यासको अन्तअन्त तिर पाठकलाई सम्बोधन नगर्नु भएको भए झनै शक्तिशाली हुन्थ्यो कि!(पेज नं १४८ र १५२) यथार्थको बाटो छोडेर काल्पनिकता तिर लम्किएको छ।
समग्रमा उपन्यास एकदमै राम्रो छ कारण यो पनि होकि उहाँको यो पहिलो प्रयास हो र यसमा नेपालीहरुको यथार्थ चित्रण छ मुग्लानको र अहिलेको युवापुस्ताले गर्ने सस्तो माया प्रेममको प्रतिफल। उहाँले यो उपन्यासबाट यो पनि भन्न खोज्नु भएको छ कि हामी कति सम्म भौतिबदी भइसक्यौँ। यती बेला मलाई महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको "पागल" कविताको कवितांस याद भयो " तिमी एकमा एक जोड्दा दुई देख्छौ तर म एकै देख्छु।"
कविता : मलाई बाँच्न मन छैन [ अमन एकल राम कृष्ण पाण्डे ]
"मलाई बाँच्न मन छैन"
हो मलाई पटक्कै बाँच्न मन छैन
तिम्ले गर्दा तिम्रो मायाले गर्दा
अनि तिम्रो धोकाले गर्दा
मलाई पटक्कै बाँच्न मन छैन !
जन्मदाता, परिवार,साथी संगीले छेकेका बाटो नाघेर ,
दिन दुगुना रात चौगुना दुश्मन कमाएर , कर्कलाको पातमाथी
सर्वस्व सहित जिन्दगी अड्याएर
केवल तिम्रो लागि जिएको मलाई
सर्वस्व सुम्पेको तिम्लेनै लात हानेपछी
धोकाको मरुभूमिमा अनेकौं कष्ट सहदै
भोक प्यासले तड्पदै
भतभती पोलेको नाङ्गा पैतालाले
तिम्रो दैलो टेक्दा
संघारमा प्रेमयुक्त रक्तका नदि बग्दा
तिमी मेरा रक्त खोलिमा स्नान गर्दै ,
प्रेमको उपासना तोडेर
घातको सफलतामा हर्षोल्लास मनाउदै
अमुल्य मेरा मोतिदाना पान गरेर
तिमी नै तिमी बसेको यो कमलो मुटुलाई
आहार बनाई तिम्लाई हेर्ने निर्दोशि नयनहरुको मट्याङ्रा बनाएर
मेरा दुस्मनका लागि मेरै मर्ममा प्रहार गर्ने औजार बनाउने तिम्रो तयारी
युद्धभुमिमा युद्धरत कुशल योद्धाको भन्दा केही कम नहुँदाको अवस्थामा यो दुर्दशा देखिरहँदा मलाई पटक्कै बाच्न मन छैन !
म अन्तिम प्रहरको कुनेटोमा रहँदा
मेरा स्वासनली बन्द गर्ने पुर्व तयारीमा
तिम्रो प्रयास अथक रहेको प्रमाण प्राप्त गर्दा
ज्युदै मरेको आभास भएपछि
अर्पिदियौ मेरो जिन्दगी कसैको पाउको धुलो बनाएर ,
पोखिदियौ छताछुल्ल भुईभरी छरिए छरपस्ट खुशीहरु
जस्लाई कसै गर्दापनी संगाल्न सकिन
र त मलाई पटक्कै बाँच्न मन छैन !
प्राण अर्पेर तिम्रा एकथोपा खुशी संगाले ,
आफैं रित्तिएर बारम्बार तिम्लाइ भरेँ
अस्तित्व बेचेर तिम्रा स्वार्थमा लेप लगाएँ ,
आखिर मिल्यो चोटको पहाड, समाजको उपहास ,
घृणा र तिरस्कारको लहर ,घात र धोकाको उपहार ,
अनि मिल्यो यमलोकको गन्तब्य
दुनियाँलाई प्रबचन दिदै हिड्ने ओठहरु
आज लज्जास्पद भएका छन्
त्यसैले त मलाई पटक्कै बाँच्न मन छैन !
छाती फुलाएर सम्मानपुर्वक बाँचेको मान्छे
तिम्रो तिरस्कार पछी
लज्जाले नाकमुख छुपाउनु पर्ने भएको छ
सम्मानमाथी हेयको दृश्ट्री परेको छ
जमघट र भेलामा देखिने मलाई एकान्तमा छुप्नै पर्ने बाध्यता जन्मेको छ
हरेक पाईला पाईलामा त्रास फैलिएको छ
मेरा लागि मात्र मेरा लागि
हिजो अरुको आत्मसम्मान बचाउन
जिउ ज्यान दिने म
आज अनाथ भएको छु,
बेसाहारा भएको छु, निरिह भएको छु
न हात फैल्याएर भिख? माग्न सक्छु न सक्षमता नै बाँकी राख्यौ तिम्ले
त्यसैले त मलाई पटक्कै बाच्न मन छैन !
मलाई क्षमा दिनुहोला
मेरा लागि राम्रो सोच्ने र म प्रती आशाबादी रहेका
मेरा आत्मीय मनहरु
बिरहमा पोखिएका शब्दहरु उपहार बनुन्
हजुरहरुका निमित्त सायद म फर्कने छैन ।
प्रेम घातले मलाई जिउन दिएन
अमन एकल राम कृष्ण पाण्डे
मुक्तक (युवराज बन्दी )
फर्कि आउने आश्वसन दिएर धोका दियौ किन ?
चोटमाथी चोट झन झन दिएर धोका दियौ किन ?
कति पीडा बोध गरे मैले तिमीले महशुस गरेकी छ्यौ
जिन्दगी सुम्पिने बचन दिएर धोका दियौ किन ?
मुक्तक : त्यो दिलमा चोट लागे यता आँशु गिर्छ [ खतिवडा सानू ]
त्यो दिलमा चोट लागे यता आँशु गिर्छ
तिमी उता छटपटाउँदा यता मुटु चिर्छ
छातीभरि मडारिन्छ अनगिन्ति माया
सम्झना भै आउँछ अनि हृदयमा छिर्छ ll
नाम :- राज कुमार धिमाल
ठेगाना :- बर्दिबास ३ महोत्तरी (हाल हेटौंडा)
दिलमा बसेर दिल, दुखाएर गई ।।
अनि आँशुको मुहान,फुटाएर गई ।।
हसाउने रमाउने, हजार छन् यहाँ,,
तर एउटै मान्छेले, रुवाएर गई ।।
यति धेरै चोट दिई,चोट माथी उस्ले,,
र त चोटैले ती चोट,भुलाएर गई ।।
माया नगरेकी हैन,औधी गर्थी माया,,
था' छैन कसरी मन, बुझाएर गई ।।
तिमी बिना मर्छु भन्थी,भन्दिन धोका दिई,
साथ छोड्नुको कारण, लुकाएर गई ।।
नेपाली कविता : पर्खाइ [कमल ढुङ्गाना एक्लो तारा ]
एकाएक कोही टाढीए
मुटुबाट मुटु झिकेर
टाढा गईकी रहेछीन सदाका लागी
मेरा नयनहरु रत खोजीरहेका छन
कुरीरहेका छन मेरा नजरहरुले
गहभरी ताल बनाएर
झर्छन अश्रुका धाराहरु
तर झरेका छैनन्
तिम्रा तस्विरहरु अश्रुसँगै
सायद ति तस्विरहरु पुन मेरो अघी
प्रत्यक्ष भौतीक शरीर धारण गरेर उभीनेछन
भौतारीन पठाएको छु
क्षितिज पारी मेरा नयनहरुलाई
र म पर्खेर बसेको छु
उनी फर्कीने आशमा...
उनलाई देख्न तल्लिन छन मेरा नयनहरु
म बुढो भएछु
मेरो भौतीक शरीर बुढो भएछ
तर मेरा आशहरु उस्तै नविन हुँदैगएका छन्
नयन पनी थाकेका छैनन् ,
कमजोर भएनछन् नयनहरु
र मेरा नयनका रेटिनाहरु..
मात्र म पर्खीरहेको छु
आफ्नो जिन्दगीलाई जिन्दगी
गल्ली गल्लीहरूमा ....
मात्र कुरीरहेको छु
तिमी फर्कीने आशमा....
मुक्तक : छाक टार्नलाई मानो कहिल्यै देखिन ! ( सुरज पराजुली )
छाक टार्नलाई मानो कहिल्यै देखिन !
घरको नचुहिने छानो कहिल्यै देखिन !!
मैले उनलाई भेटेको दिन देखी नियाल्दा,
उनका आँखा ओभानो कहिल्यै देखिन !!!
जताततै मनको डेरा जमाउनेको माया बढी हुन्छ । ( राम अप्रिय )
पिज्जा,बर्गर ह्विस्कीसंग रमाउनेको माया बढी हुन्छ ।
धेरै थोरै जे होस् डलर कमाउनेको माया बढी हुन्छ ।
नाम के हो,थर के हो कसलाई यहाँ के को खोजिनिती ;
जताततै मनको डेरा जमाउनेको माया बढी हुन्छ ।
जिवन मा तिम्रो कमी सधै भयो सानु
माया अभाव मा जुनि यसै गयो सानु
फुल्दै थियौँ तिमी यो मनको बगैचामा
कपिलामै कुन पापिले टिपी लयो सानु
ज्वालामुखी फुट्न सक्छ,भुईँचालो,आउन सक्छ
एक्छिनमा जे नि हुनसक्छ,कसले,बताउन सक्छ
तिमीले कुनै रात सपनीमा,मलाई नदेखेको झोकमा
विचार गरेस्,मेरो आँखा सधैँलाई,निदाउन सक्छ
हमेशा खुशी राख्नेसँग,एउटा खतरा कायम रहन्छ
त्यही मान्छेले आँसु नरित्तिने गरि,रुवाउन सक्छ
तिमी माया दिँदा,लेखाजोखा नगर,दिईमात्रै राख
यो मुटुभित्र कत्ति अटाउन सक्छ,अटाउन सक्छ
संस्कारी घरले छोरीलाई,बडो स्याहार गरेको हुन्छ
र उस्तै परेमा उसैलाई नालीतिर,मिल्काउन सक्छ
भाग्यमानीहरु प्रेमै नगरी,प्रेमिका भेट्टाउने गर्छन्
अभागी प्रेमी,न प्रेम पाउँछ,न प्रेमिका,पाउन सक्छ!
कोसिस असीमित गर्छु तर,थकित हुन्छु
तिम्रा अन्तर्वश्त्रसँगको युद्दमा,पराजित हुन्छु!
तिम्रो पिता बनेकोजस्तो,अभिनय गर्छु
क्षणमै निष्कपट शिशु,सावित हुन्छु
मलाई सुन्नलाई,सहज होस् भनी तिमीलाई
कहिले गजल हुन्छु,कहिले, गीत हुन्छु
गहिरो चुम्बनको रुपमा,सन्चित हुन्छु
अनि गहिरो चुम्बनबाटै, सिन्चित हुन्छु
अन्यौलताको विधेयेक,प्रस्तुत गर्छु टोलाएर
तिम्रो एक मुस्कानद्वारा,पारित हुन्छु!
युद्ध हुन्छ आगो आगो बिच् पानी-पानीको युद्ध हुन्छ।
कस्तो होला युद्ध पनि जवानी-जवानीको युद्ध हुन्छ ।
डुब्दो घाम चियाएर पुर्वीमन उपवास बस्दा यहाँ
लाल किरण छर्नु अगी विहानी-विहानीको युद्ध हुन्छ।
सितको थोपा टिलटिलाउँछ फुलहरूको तरेलीमा
पत्रै-पिच्छे फुलहरूमा कँहानी-कँहानीको युद्ध हुन्छ।
एउटा आँखा पूर्व हेर्दा अर्को पश्चिमी हेर्न पुग्छ,,
एउटै मानव आकृतिमा नानी-नानीको युद्ध हुन्छ।
आज भोली भन्दै यंहा, टार्नेहरू धेरै देखें।
बसी धर्तिमै जून तारा ,झार्नेहरु धेरै देखें।
कस्ता कस्ता चाल ,देखाउँछन ए भगवान
समीप बोलाई,काँडे तारले,वार्नेहरु धेरै देखें।
सायद राजनितीको खेल जस्तै भएर होला,
मिलेको दाजु भाईलाई विग्रारनेहरु धेरै देखें।
सयौं जुनी तिम्रो साथ, छोडदिन् भन्नेहरू नै,
मौसम छोडी बेमौसमी पिर्ती सार्नेहरु धेरै देखें।
सतहबाट हात समाई ,पुगेपछि गोहीराईमा,,
भुमरी र छालमा पारी,आफु तर्नेहरू धेरै देखें।
धनीलाई राजमहल ,गरिवलाई सानो ,घर छैन हजुर।
जति भेल आएपनि नदिको,तिरलाई, डर छैन हजुर।
पाईलै पिछे छुरा हान्नेहरुको जमात छ आज भोली,,
आफ्नै नातेदार मान्छे दाजु भाईको ,भर छैन हजुर।
म ठुलो जाती तिमी सानो जाती भन्दै हिड्छन मान्छे,
यंहा देशप्रेमी देशभक्ति खोज्दा खेरी,तर छैन हजुर।।
तर्साएर आफ्नो बहसमा पार्न ,वरीपरी डुल्छन् यहाँ
आफ्नै तालमा शान्तिले सास फेर्ने,शहर छैन हजुर
धादिङ्ग को चिसो चिसो ,पानी मन पर्यौ।
पानी संगै यंहा नलाङ्गेली,नानी मन पर्यौ।
हेर्दा खेरी ईश्वर ले फुर्सदैमा बनाए जस्तो,
जे हेर्यो तेही राम्रो,मलाई जवानी मन पर्यो।
साँझ पर्यो छुट्टनु पर्ने ,मन दुखाई दुखाई,
भोली भेटने आशामा,विहानी मन पर्यो।।
देखेर मात्रै नपाईने ,मन मिलनु पर्दो रहेछ,
यो डि.पिको मनमा बस्ने,रानी मन पर्यो।।
मेरो देशको पिँडाहरु, खोई दिने को छ हेर।
दु:खेको यो देशलाई ,छोई दिने को छ हेर।।
जता ततै विकाश देख्छु,अनी मन बरालीदा,
नेपालको लागी सुडेनी ,भोई दिने को छ हेर।
काला सेता बादल जस्तै ,मढारीदै छ यो देश,
सावुनले झै देशको मुहार धोई दिने को छ हेर।
कर्कलाको पानी जस्तै बगी जाने जिन्दगीमा ,,
देश जनजिरले बाधीँदा , रोई दिने को छ हेर।।
थप पढ्नुहोस् .... »
मुक्तक : एक दिन मात्र किन सम्मान गर्छौ नारीको ? [नानू मगर ]
नारी दिवसको शुभकामना सदाबहार आउँछ
दिवस कै भोली पल्ट नारीमा अत्यचार आउँछ
आजको दिन मात्र किन सम्मान गर्छौ नारीको
पटकपटक नारी नै लुटिएको अखबार आउँछ।।
किचनास ८ स्याङ्जा
कविता : जिन्दगीको अध्याय [ बिनोद आचार्य ]
जिन्दगीको एक अध्याय सकिए लगत्तै,
टालिएका आँखाहरु खुलेका छन्!
एका बिहानै क्षितिज सम्म छरिएर
बिगतमा टागिएका भविष्यको
एक जोडा तस्विर खिचेका छन!
भरे आकाशमा बादल लागेन भने,
एका बिहानै खिचेका एक जोडा तस्बिरहरु
जुनमा लगेर टासिदिन्छु
ता कि भविष्यमा मेरा आँखा टालिएर
अध्यारै-अध्यारो बाटो हिड्नु परे पनि
जुनसँगै चम्किरहुन मेरा भविष्यका
सिङ्गो बृतान्तका कुनै पनि रहस्य
र कुनै पनि बिकल्प खोजिने छैन
जिन्दगी भोगाईका थुङ्गा उनेर
मेरो भविष्य मिश्रित प्रकाशले
चम्किएका हिमकणहरू बटुलेर मात्र
पुरा जिन्दगीको अध्याय अन्त हुनेछ!!
रुद्रपुर 9, रुपन्देही
गजल : प्रियाको वचन टेरिरँहु लाग्छ [ देवराज भन्तना"अपवाद ]
हो! तिम्लाई मात्र हेरिरँहु लाग्छ आजभोलि
न्यानो अंगालोमा बेरिरँहु लाग्छ आजभोलि
फूल जस्ति पनि तिमी जुन जस्ति पनि तिमी
गीत गजलमा केरिरँहु लाग्छ आजभोलि
मर भनेनि मर्दिन्छु बाँचेको छु तिम्रै लागि
प्रियाको वचन टेरिरँहु लाग्छ आजभोलि
आँखै राम्रो मायालुको रुपको के कुरा
चट्ट पहिरन फेरिरँहु लाग्छ आजभोलि
विश्वासको खेति गर्दा शंकाहरु फल्ने गर्छ
दिलको मझेरीमा घेरिरँहु लाग्छ आजभोलि
-देवराज भन्तना"अपवाद "
प्रकाश बुढाथोकी का गजलहरु
हरेक पल मन जलाइ दिन्छौ,को हौँ तिमी मेरो ?
घाइते यो मुटु चलाई दिन्छौं ,को हौँ तिमी मेरो ?
बिर्सु भनी लाखौं कोसिस पनि नगरेको कहाँ हो र
फेरि मनमा आगो बलाइ दिन्छौं ,को हौँ तिमी मेरो?
न छ भोक न छ प्यास नत यो मन ठेगानमै रहन्छ,
याद पठाई यो देह गलाइ दिन्छौं ,को हौँ तिमी मेरो?
खुसि खोसि चोट दिदै दर्द दिन्छौं पल पल मलाई ,
दुख पीडा, आँसु फलाइ दिन्छौं को हौँ तिमी मेरो ?
केबल तिम्रो लागि मात्र, साराको मन दुखाइ दिन्छु,
तर सबै चोट पीडा मलाई दिन्छौं को हौँ तिमी मेरो?
केहि रोचक मुक्तकहरु [ कृष्ण प्रताप महत ]
यति धेरै कोहि मान्छे मन पर्छ किन ?
खाएनी लाखौ चोट नजिक सर्छ किन ?
आँखा,मुटु,मस्तिष्क सबै दोषी देख्छु म,
हर पल उनकै सम्झना गर्ने गर्छ किन?
कोहि सङ्ग मेरो साथ छोड्नु पर्नेछ ।
खाएका बाचा कसम तोड्नु पर्नेछ ।
कति हिड्नु उसैको पछी लागि मात्र,
अब त पुरै परिक्रमा मोड्नु पर्नेछ ।
तिमी पनि मायाको भोको छौ भने ।
तन, मन, बचनको चोखो छौ भने ।
मैले पनि नो भन्न कहाँ सकुला र,
भित्री दिल साच्चिकै छोको छौ भने।
बुढा बाले गाई बस्तुको स्वस्ती गर्दैछ्न रे ।
छोरा बिदेस बाईस घण्टा गस्ती गर्दैछन रे ।
बच्चा पढाउन शहर पसेका हाम्रा बुहारिहरु,
हल्ला आउछ्न घरगाउमा मस्ती गर्दैछन रे ।
कोहि उसलाई जिस्काउछ्न रुप देखेर ।
कोहि कोहि जिब्रो रसाउछ्न खुब देखेर ।
फलाम पनि सुन बन्छ जलप पोते पछि,
म यता हासिरहेको छु तिनै बेकुब देखेर
बाह्रै महिना घरमा बुढी अन्नबाली छर्दा पनि ।
बीस घण्टा तातो रापमा मैले ड्युटी गर्दा पनि ।
अझै पीडा थप्दा प्रभु यस्तो सोच्न बाध्य छु म,
हिरन समेत दिन्नौ होला छट्पटिदै मर्दा पनि ।
भन्दै थियो उ मलाइ माया पनि बिक्छ ।
स्वास्नी राखे बजारमा नानाथरी सिक्छ ।
७ जुनि कसम खाका अन्तै भाग्छ्न भने,
बिहे हैन कृष्ण सर एक्लो बस्न ठिक छ ।
तिम्रो घरमा बिहेको होम चल्दै गर्दा ।
मेरो यता घाटतिर लास जल्दै गर्दा ।
अरु थप के होला सोच्न थाल आफै,
फरक धारका घटनामा आगो बल्दै गर्दा ।।
कृष्ण प्रताप महत
गुल्मी पिपलधारा -३
आँखा हैनन् आँखाका ,नानी बनाउदैछु।
समेटेर सिंगो जीवन ,कहानी बनाउदैछु।
एउटा् सुन्दर पिरतीको दरबार छ त्यहाँ ,
मै बनुला राजा तिम्लाई,रानी बनाउदैछु।।
नवीन संघर्ष (सिन्धुली )
आफ्नो देशको सम्झनामा केहि गजलहरु [ नानू मगर ]
नानु मगर ज्यु का केहि गजल हरु
आज भन्दा भोली झन मेरो देश डुब्दै छ।
अनि भित्र भित्रै भस्सिएर त्यसै लुक्दै छ।
कति दिन बस्ने हुरि बतास संग लडेर।
सान्ति छैन अझै देशमा भुकम्प घुम्दै छ।
कठै कस्तो भयो होला यो मेरो देश आज।
यहाँ नेपालीको आँशुले मातृभूमी रुझ्दै छ।
नेपाल आमाको सम्झनामा कल्पिदै हामी।
हाम्रो ईतिहास झल्काउन सप्ना बुन्दै छ।
बिचरा रुदै छन् सबै भाब बिहील भएर।
पीडाले निद छैन भोक पियास भुल्दै छ।
चस्केला छाती, खाडीमा मदन, ढलेको समय
एक् थोपा आँसु, नझार्नु देह जलेको समय
भौतिक शरीर , भएनी टाढा, म संगै आत्मा छ
भनेर जान्नु, मध्यनी रातमा, छलेको समय
बिछोडले मुटु, दुखेमा अति , सम्झेर भुलिदेउ
यौवन छँदा , काखमा बसी, चलेको समय
धराको हामी, अतिथि रैछौं, दुईदिनको निमित्त
फर्केर उतै, जानु नै पर्छ , गलेको समय
गए म टाढा, आउँदछ भनी, भर पर्नु अबश्य
चुलाको आगो, भर्भर गरी, बलेको समय
युवराज गौतम अन्तरमुखी
चुकुप्रकाश मुक्तक दोहोरि
थप गजलहरु पढ्नुहोस -
मनपर्ने रेडियो कार्यक्रम छान्नुहोस्
muktak sarobar (8)
nepali film (1)
गजल सुधा (2)
बहकिने मन (3)
माया के होला (2)
मुक्तक डायरी (1)
मुक्तक दोभान (4)
मुक्तक माला (74)
साहित्य दर्पण (2)
साहित्य सरगम (4)
स्मृतिका पानाहरु (2)